09-01-2013 07:46 AM
Rep Power0Hi.
Can I have the following books:
1) System Performance Evaluation and Design Guidelines for Displacement Ventilation
2) System performance evaluation and guidelines for displacement ventilation(ASHRAE 2003)
3) Displacement ventilation in non-industrial premises (REHVA,2002).
Reply With Quote 10-10-2013 03:28 PM
Aye Min Thaw
Rep Power0RC design နဲပက်သက်သောမြန်မာလိုစာအုပ်လေးတင်ပေးပါခင်ဗျား
Reply With Quote 01-05-2014 09:30 PM
par puu lay 3631
Rep Power0ကျွန်တော် aircraft control system ဘာသာသင်နေရပါတယ် india မှာဆိုတော့သူတို့ပြောတာနားမလည်လို့ control system နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်နှင့် laplace အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များရနိုင်ရန်ကူညီကြပါခဗျား
Reply With Quote 11-11-2016 09:08 PM
Htet Lwin Oo
Rep Power0ကျွန်တော်က နယ်ကပါ Microsoft Project ကို မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ Ebook လေးများရှိရင် တင်ပေးပါလား
Online မှာလည်း English လိုဘဲတွေ့လို့ပါ။
တနင်္ဂနွေ ဖိုရမ်မှရေအလှူအတွက် လိုက်ပါမည် သူများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ
By pooh.kglay in forum MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ
Last Post: 03-20-2014, 11:51 PM
MabLat ၇ဲ့ Coading လေးပါစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
By ၇ဲလင်းဦး in forum MatLab
Last Post: 05-15-2010, 09:54 AM
ဖိုရမ် အလှူအတွက် ဒီနေရာလေးမှာ စာရင်းပေးဖို့ စုံစမ်းနိုင်ပါတ.် By pooh.kglay in forum MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ
Last Post: 04-30-2010, 08:52 PM
irc.myanmarengineer.org ဖြင့် IRC chatting jion နိုင်ပါပြိ
By yeakharr in forum အကူအညီ
Last Post: 08-30-2008, 05:48 PM
All times are GMT +6.5. The time now is 03:44 PM.